Funda ngePurim okanye i-Bible Feast yeLots
Umthendeleko weLots, okanye iPurim , ukhunjulwa usindiso lwabantu abangamaYuda ngokusebenzisa ubuqhawe bukaEstere uEsta ePersia. Igama elithi Purim, okanye "amaqashiso," lalininzi linikezelwa kulo mthendeleko ngomsindo, ngenxa yokuba uHamani, intshaba yamaYuda, wayelenqe ukuba abatshabalalise ngokuphanga i-lot (Estere 9:24). Namhlanje amaYuda angabhiyozeli nje kuphela ukukhululwa okukhulu kwiPurim kodwa kunye nokuqhubeka kusinda kohlanga lwamaYuda.
Ixesha lo kuKhumbula
Namhlanje iPurim ibhiyozelwa ngomhla we-14 wenyanga yesiHebhere yase-Adar (ngoFebhuwari okanye ngoMatshi). Ekuqaleni iPurim yasungulwa njengemikhosi yomhla ngemihla (Estere 9:27). Jonga iMithendeleko yeeKhaya zeKhalenda yamaphepha athile.
Ngomnyaka wesithathu wokubusa kolawulo lwasePersi , uKumkani Xerxes (uAhaswerosi) wayelawula esihlalweni sakhe sobukhosi kwisixeko saseShushan (ngasentshonalanga-ntshona yeIran), kwaye wayedla zonke iinduna kunye namagosa akhe. Xa wabizwa ukuba avele phambi kwakhe, umfazi wakhe omhle, u-Queen Vashti, wenqaba ukuza. Ngenxa yoko, wayekade exoshwa ebukhosini bukaKumkani, kwaye ukumkanikazi omtsha wayefunwa phakathi kweentombi ezintle zincinci zombuso.
UMordekayi, umJuda ovela kwisizwe sakwaBhenjamin, wayehlala ekudingisweni eShushan ngelo xesha. Wayenomzala wakhe ogama lakhe linguHadassa, owamkela waza wakhula njengendodakazi yakhe emva kokufa kwabazali bakhe. Hadassah, okanye uEstere, okuthetha ukuba " inkwenkwezi " yasePersi, yayithandeka kwifomu kunye nempawu, kwaye wafumana inceba emehlweni kaKumkani waza wakhethwa phakathi kwamakhulu amabhinqa ukuba abe nguKumkanikazi endaweni kaVashti.
Ngaloo ndlela, uMordekayi wafumanisa icebo lokuba uKumkani abulawe waza watshela umzala wakhe uEstere uEstere. Yena ke, wabika iindaba kuKumkani waza wanika uMoridekayi isikweletu.
Kamva kuHaman, indoda embi yanikwa isihlalo esiphezulu seNkosi, kodwa uMoridekayi wenqaba ukuguqa phantsi aze amkhomelele.
Oku kwavutha kakhulu uHamani, kwaye wayesazi ukuba uMordekayi wayengumYuda, ilungu lomncintiswano wamthiya, uHamani waqala ukuceba indlela yokutshabalalisa onke amaYuda kulo lonke elasePersi. UHamani wenza ukuba uKumkani Xerxes akhiphe umyalelo wokubhujiswa kwabo.
Kuze kube ngeli xesha, uEstere uEstere wayeyigcine ifihlakele kuYuda. Ngoku uMordekayi wamkhuthaza ukuba angene ebusweni bukaKumkani aze acele inceba kumaYuda.
Ekholelwa ukuba uThixo wayemlungiselele umzuzu nje kwimbali - "ngexesha elinjengale" - njengesixhobo sokuhlangula abantu bakhe, uEstere wanxusa wonke amaYuda kuloo mzi ukuba azilawule aze amthandazele. Wayefuna ukubeka umngcipheko ngobomi bakhe ukucela abaphulaphuli kunye noKumkani.
Xa wayebonakala phambi kukaKumkani Xerxes wayekuvuyela ukuphulaphula uEstere aze anike nantoni na into ayenayo. Xa uEstere wambonisa ukuba ungumYuda waza wancenga ubomi bakhe nobomi babantu bakhe, uKumkani waba nomsindo noHamani waza waxhoma yena kunye noonyana bakhe emgodini (okanye wabethelwa kwisibonda sokhuni).
UKumkani uXerxeshe wabuya umyalelo wakhe wangaphambili ukuba abulale amaYuda aze anike amaYuda ilungelo lokuhlangana nokuzikhusela. UMordekayi wafumana indawo yozuko kwikhotwe leKumkani njengesibili kwisikhundla kwaye wakhuthaza onke amaYuda ukuba athathe inxaxheba kwimibhiyozo yonyaka yokutya kunye nenjabulo, ekukhunjuleni olu sindiso olukhulu kunye nokuguquka kweziganeko.
Ngokomyalelo waseburhulumenteni uEstere, le mihla yasungulwa njengesiko esihlala njalo esibizwa ngokuthi iPurim, okanye uMthendeleko weeLots.
UYesu kunye noMthendeleko weeLots
I-Purim ibhiyozela ukuthembeka kukaThixo , ukukhululwa kunye nokukhuselwa. Nangona amaYuda ayetyala ngokubulawa ngu-King Xerxes umyalelo wokuqala, ngo-Queen Esther wangenelela ngokunyanisekileyo nokuzimisela ukujamelana nokufa, ubomi babantu babusindiswa. Ngokufanayo, sonke esonayo sinikezelwe ngumyalelo wokufa, kodwa ngokungenelela kukaYesu Kristu, uMesiya , umyalelo omdala unelisekile kwaye kuye kwasungulwa ukuvakalisa okutsha ubomi obungunaphakade:
Kuba umvuzo wesono kukufa, kodwa isipho samahhala sikaThixo bubomi obungunaphakade ngoKristu Yesu iNkosi yethu. (NLT)
Iinkcukacha Ezifutshane NgePurim
I-Purim isigubha ngokuvuya namhlanje phakathi kwamaYuda ngokufunda yonke incwadi kaEstere kwesikhungu. Ukusebenzisa abasikizi, abantu bavuya kakhulu ngokukhankanywa kwegama likaMoridekayi kunye neengxolo zokubethekisa, ukubethelwa kweenyawo kunye nokubhoxwa kuya kuviwa xa kuthethwa igama likaHamani.
IHamanthen yindlela yamaJuda ayiphatha ngayo ngexesha lePurim. Inamacangca amathathu kwaye ibonisa isitya sikaHamani.
Kuqhelekile ukubona uPurim edlala ibali likaEstere ePurim. Iimfesane zezitalato kunye nezidlo ziye zithandwa, kwaye abantu banxibe kwiingubo ezifanekisela u-Esteri owaziwayo.
AmaYuda ayadingeka kwiPurim ukunika izihlwempu izipho.
Isikhokelo seNyathelo-ngeNyathelo-nyathelo lokuBamba nokuSebenzisa iPrusik Knot
Iimifanekiso ezi-8 ezihamba kunye noRobert Mitchum
Iikholeji zoBugcisa boLuntu obuPhambili
I-Admissions ye-College ye-Saint Michael
IziHlomelo zeziHlomelo kunye neziGwebo